Ciid wanaagsan/Eid Mubarak, Xagee lagu tukan doonaa salaada ciida magaalada Oslo - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Ciid wanaagsan/Eid Mubarak, Xagee lagu tukan doonaa salaada ciida magaalada Oslo
Ciid wanaagsan/Eid Mubarak, Xagee lagu tukan doonaa salaada ciida magaalada Oslo
Bahda NorSom News oo isku duuban waxaan farxada ciida la qaybsaneynaa dhamaan bulsho weynta soomaaliyeed meel walbe oo ay joogaan, gaar ahaan reer Norwey. Waa xili farxad iyo reyn reyn ay ku dheehantahay, waa xiligii ay Muslimiinta caalamku muujinjireen midnimada iyo galgacalka dhexdooda ah.Waxaan ilaahay waydiisaneynaa in uu farxada ciida darteed uu umadeena ka dhex dhaliyo maxabo iyo isjeceyl dhexdooda ah, ilaahayna nagu dawo midnimo iyo iskaashi xiligan adag ee jaaliyadan soomaaliyeed ee wadankan ay ku sugantahay.
Dhowr qof oo akhristyaasha NorSom News kamid ah ayaa naga codsaday inaan soo bandhigno goobaha salaada ciida lagu tukanayo magaalada Oslo. waana kuwan labada goobood ee ugu waawen ee salaada ciida lagu tukanayo maalinta bari ah:
Masaajidka Towfiiq Islamic Senter:-Vallhall Arena, Adresska: Innspurten 16, 0663 Oslo. Macluumaad dheeri ah: Det Islamske Forbundet
Masaajidka raabidada:– Ekeberghallen, Adresse: Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Macluumaad dheeri ah: EID Al FITR BØNN Towfiiq Islamisk Senter
Previous articleEedaymihii loo soo jeediyay Hassan Kheyre oo beenoobay
Next articleSylvi Listhaug: waxaan ku fakarayaa inaan siyaasada isaga baxo